2014 – Ck4Ubuntu
Ck4Ubuntu Keep Learning Keep Sharing
Ubuntu One FREE for everyone
Posted on July 24, 2014 by chitkoko	Posted in cloud, Community, My Story, Ubuntu, Ubuntu Free Class, Ubuntu mobile, Ubuntu Tablet	— No Comments ↓
What is Ubuntu ? Ubuntu သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသော Linux-based Operating System တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Ubuntu ကိုလူသန်းပေါင်းများစွာတို့မှ သုံးစွဲနေကြပါသည်။နိုင်ငံတကာမှ အသုံးပြုနေကြသော developer community လည်းရှိနေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် Ubuntu ကိုရွေးချယ်ရတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ကိုဘာကြောင့် ရွေးချယ်ရတာလဲဆိုတော့ ….. Ubuntu ကို အမြဲတမ်းအပြည့်အဝ အခမဲ့ ရရှိပါမည်။ Ubuntu ကိုသင်သည်အလွန်လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Ubuntu တွင်ပါဝင်သော လုံခြုံရေးစနစ်သည် အလွန်စိတ်ချ ရပါသည်။…
Tagged with: community, events, Ubuntu, Ubuntu Myanmar Lo Co Team, ubuntu-mm, Ubuntu-MM events, UbuntuMM
Posted on July 21, 2014 by chitkoko	Posted in Installaltion, Raspberry Pi, RPI OS	— No Comments ↓
NOOBS Setup Raspberry Pi ကို သင်စတင်အသုံးပြုဖို့ဆိုလျှင် Operating system OS တစ်ခု ကိုသင်လိုအပ်နေပါပြီ။ NOOBS (New Out Of the Box Software) သည် Raspberry Pi အတွက် အလွန်လွယ်ကူသော operating system install manager ဖြစ်ပါသည်။ NOOBS ကို သင်သည် Online မှနေ၍ download ပြုလုပ်၍ရယူနိုင်သလို Swag Store တွင် £4 နှုန်းဖြင့် NOOBS အသင့်သွင်းပြီး SD card ကို online မှတဆင့်ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။အကယ်၍…
Tagged with: NOOBS, NOOBS LITE, PiSetup, Raspberry Pi, RPI OS, UbuntuMM
ubuntu touch porting / installation guide
Posted on April 20, 2014 by chitkoko	Posted in Installaltion, Ubuntu mobile, Ubuntu Tablet	— No Comments ↓
အောက်ဖော်ပြပါ devices များသည် Ubuntu touch တင်ရန်အတွက် Target devices များဖြစ်ပါသည်။ သင် android OS ပြန်လည်တင်လိုပါက ပြန်လည် ရယူရမည့် android images များဖြစ်ပါသည်။ Device Android Drivers Android Images Status Nexus4mako occam Active development Nexus 10 manta mantaray Active development Nexus72013 WiFi flo…
Tagged with: install, Ubuntu Phone Touch/install, Ubuntu Tablet, ubuntu-mm
what things to do after install ubuntu
Posted on April 17, 2014 by chitkoko	Posted in install20things, Installaltion, Software	— No Comments ↓
သူငယ်ချင်းတို့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ Ubuntu 14.04 ကထွက်တော့မှာနော် . fresh installation လုပ်မှာလား ။ ဒါဆိုရင်တော့ /home directory ကိုအရင်ဆုံး backup လုပ်ါထားလိုက်ပါအုံး ။ ပြီးတော့ installation ပေါ့နော့် ပြီးတာနဲ့လုပ်ရမယ့်အရာတွေက တန်းစီနေတာနော့် ။ Terminal ကို Ctrl+Alt+t ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ါပါ အောက်ပါ command ကို copy >paste လုပ်လိုက်ပေါ့ ။ sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade; sudo apt-get install…
Tagged with: afterinstall
cloud service for U
Posted on April 5, 2014 by chitkoko	Posted in cloud, Installaltion, Software	— No Comments ↓
I wish to be April fool but many of us had hoped it was an April Fool’s prank. But Ubuntu One will, in fact, no longer be available as of June 1, 2014 and all data will be wiped July…
Tagged with: 4shared, cloud, dropbox, googledrive, ubuntu0ne
Install JavaSE and Eclipse in Ubuntu
Posted on February 23, 2014 by chitkoko	Posted in Installaltion, Software	— No Comments ↓
JavaSE ကို Ubuntu Operation System မှာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြ ပါ လင့် မှတဆင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ http://ubuntuone.com/1qTiposhVB5bPQuwjKaknr Eclipse ကို Ubuntu Operation System မှာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြ ပါ လင့် မှတဆင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ http://ubuntuone.com/7bM74TpKNjXrtN4PJztzlO ဖော်ပြပါ Install JavaSE and Eclipse in Ubuntu ကိုရေးသားပေးသော thetoozin@gmail.com ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
Tagged with: Eclipse, javaSE
ck Select Category cloud (2) Community (10) Creation (1) CreativeCommon (1) DIY (1) install20things (4) Installaltion (21) Kernel (2) Learning (1) License (1) My Story (6) nitro share (1) PI backup (1) Programming (1) Raspberry Pi (5) RPI OS (1) sh (1) Software (18) teanviewer (1) Ubuntu (6) Ubuntu Free Class (2) Ubuntu mobile (5) Ubuntu Tablet (5) UbuntuMM (5) Uncategorized (9) Windowspassword (1)
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာစရာ websites များ July 15, 2017
Creative Commons March 3, 2017
Fuck OFF DDOS July 7, 2016
Starting Java program by using Netbeans April 4, 2016
Starting Java program by using Eclipse April 4, 2016
© 2018 Ck4Ubuntu